China Imagnetic Liquid Traps abavelisi kunye nabathengisi | Meiko Magnetics
Imigibe yokuLungisa iMagnetic Liquid yenzelwe kwaye yenziwa nguMeiko Magnetics, ukukhupha izinto eziyintsimbi kuludaka okanye izinto ezingamanzi eziluhlaza ukuze kucocwe izinto kwinkqubo yemveliso. Inani leetyhubhu ezisisigxina zemagneti lokucoca ukuhamba kunye nokukhupha isinyithi esingafunekiyo. Iyunithi iqhagamshelwe ngokulula kumbhobho osele ukho ngokudlula kwiiflanged okanye iziphelo zemisonto. Ukufikelela ngokulula nangokulula kunokwenzeka kusetyenziswe isiciko sokukhululwa ngokukhawuleza. Ukucocwa kweemagnethi kufezekiswa ngokulula ngokususa isiciko sendlu kunye nokushenxisa indibano nganye yemagnethi.
Egqithileyo Ukubamba iimagnethi zeLilot leleli
Okulandelayo: Iimagnethi zomGibe woTywala kunye nohlobo loQhagamshelo lweFlangle
Icebo lokucoca ulwelo Magnetic
ulwelo olucocekileyo olubambe umazibuthe
ABS ngerabha Ngokusekelwe Round iimagnethi Positioning ...
I-Bar lever ye-Steel yokukhupha i-Push / I-Butler Button ...